I-CELUM Advances Digital Asset Management | Martech Zone
ICELUM Advances Digital Asset Management
ULwesine, May 5, 2016 ULwesine, May 5, 2016 Douglas Karr
Sibhale ngenhloso ye- Ukuphathwa kwefa ye-Digital amasistimu kanye namandla abo okusiza ukuvikela uphawu lomkhiqizo nemiyalezo, ahlinzeke ngenjini eseshekayo yokuthola okuqukethwe, kanye nezindlela zokuguqula izinhlobo zemidiya ezizosetshenziswa ngeziteshi ezahlukahlukene. Abathengisi abaphambili basebenzise nezinhlelo ukuqapha ukuhambisana kokuthengisa nokumaketha nokusebenza ngempumelelo kwezokuthengisa.
Ngenkathi olunye uhlelo oluningi lwe-DAM empeleni luyisistimu yefayela ekhazinyulisiwe engazithuthukisi izinqubo, CELUM Yakhelwe ukuba yisikhungo esikhulu sokuqukethwe. Iyakwazi ukwenza sengathi i-ERP yakho, i-CRM, i-PIM noma uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe kwewebhu futhi ivumela ukuhlelwa kokuqukethwe okuqondile eziteshini eziningi.
Ipulatifomu ivumela imikhiqizo ukuthi zenzele ikhasi labo lokungena ngemvume, ideshibhodi nendawo yokusebenza - kubukwe kubasebenzisi bangaphakathi nabangaphandle. Amaphrofayli we-interface ahlukile aphethwe ngomklamo ojwayelekile, ongenziwa ngezifiso kumaqembu abasebenzisi ahlukile usebenzisa i-Configuration Management Application (CMA).
CELUM ukhiphe a umphathi omusha wesilayidi wehhovisi.connect kanye I-Power Point®. Isistimu ingafaka ngqo ama-slides kusuka kwisethulo esisodwa noma eziningana kwisethulo samanje. Amaslayidi amaningi avela kuzethulo ezahlukahlukene angakhethwa ngasikhathi sinye afakwe kusethulo. Umsebenzisi unokuqonda kuzo zonke izinguquko ezenziwe kuphrezentheshini ehleliwe futhi ukufinyelela kuzethulo ezikhishiwe kungahle kuvinjelwe.
Izici ze-CELUM's Digital Asset Management:
Ukulayishwa okulula nokusesha - Layisha kalula - okulayishiwe okukodwa, kweqoqo noma okuhlanganiswe ngokuphelele. Thola izimpahla zakho ngamawijethi wokusesha anwebekayo.
Ukuhamba komsebenzi okudala - Yenza futhi ulandele izinqubo zokudala ngemisebenzi nangokulawulwa kwenguqulo.
Linganisa impumelelo - Bona ukuthi yikuphi okuqukethwe okusebenze kahle kunoma yisiphi isiteshi - amasu wokuzivumelanisa nokuhlaziya ukuthandwa nokwabelana kokuqukethwe okuthile.
Ukuphathwa kwamalungelo okuzenzakalelayo - Phatha ukusetshenziswa kwamalungelo, uvikele amalayisense, futhi uqiniseke ukuthi ukusetshenziswa kabi kuyatholakala futhi kuvinjelwe.
Hlanganisa bese uhambisa - Dala futhi uhambise amaqoqo kuzethameli ezahlukahlukene ngeziphephelo ukuvikela okuqukethwe okubucayi.
Phatha noma yiluphi uhlobo lwefayela - Phatha noma yiluphi uhlobo lwefayela bese uthola amakhono afana nokukhishwa kwemethadatha, ukuguqulwa nokubuka kuqala okulungiselelwe iwebhu ngamafomethi wamafayela angaphezu kwama-200.
Diliva kwezinye izinhlelo - Noma yikuphi okuqukethwe kunoma yiluphi uhlelo - olulungiselelwe amanethiwekhi ahlukile wokulethwa kokuqukethwe namadivayisi. I-CELUM ingahlanganiswa kunoma yiluphi uhlelo ngama-API ayo anamandla.
Lawula ukufinyelela - Enye yezinhlelo ezinamandla kakhulu zokulawula amalungelo embonini yokuphathwa kokuqukethwe. Izimvume eziqhutshwa ngefa zinika amandla izinqubo eziyinkimbinkimbi zokugunyazwa kalula ngokungenakulinganiswa.
Imithombo yezokuxhumana nokuqukethwe - Isilinganiso sokuhlanganisa nokuphumelela
Landa i-Whitepaper yeCELUM: Kungani Ibhizinisi Lakho Lifuna I-DAM
Tags: ukuphathwa komkhiqizoamathuluzi omkhiqizocelumisicelo sokuphathwa kokumiswaIdamuukuphathwa kwempahla edijithaliamafomethi wefayelaoffice.connecti-Power Pointamasilayidi e-PowerPoint
Shakr: Dala Amavidiyo Wakho Wakho Ebhizinisi Ku-inthanethi Usebenzisa Izibonisi Ezimangalisayo